/ Products / Madzimai eHormoni / 17-Hydroxyprogesterone caproate upfu
Rating: Category: Madzimai eHormoni
MUTSVENE unobatsira nekugadzira zvigadzirwa kubva ku gram kusvika kuhuwandu hwe17-Hydroxyprogesterone caproate powder (630-56-8), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
17-Hydroxyprogesterone caproate powder, Vanenge vana mazana mashanu ezviuru vanozvarwa preterm muUnited States gore rega rega. Kuberekwa kwekutanga (PTB), kana kuberekwa pasi pemasvondo makumi matatu nemanomwe ekubata, kunoisa vacheche panjodzi yakakura yekufa uye ndicho chinonyanya kukonzera kuremara kwenguva refu muvana. Pamusoro pezvo, zvehutano zvine chekuita nePTT zvinodhura iyo US yehutano system inodarika $ 500,000 bhiriyoni gore rega rega. Kudzivirira PTB kwakakosha mukusimudzira hutano hurefu uye kukura kwevacheche munyika yese.
I.17-Hydroxyprogesterone caproate powder basic Character:
Makemikari Mazita: 17-Hydroxyprogesterone caproate powder
Mamwe Mazita: 17-OHPC, 17P, hexanoate
2. 17-Hydroxyprogesterone caproate powder Ushumiri:
Mushonga 17-alpha hydroxyprogesterone caproate injectable synthetic progestin. Yakave yakaratidza kubudirira mukudzivirira kana kunonoka kuberekwa kwepakutanga mukudzivirira kweimba singleton kuvakadzi vane nhoroondo yekuzvimirira kwepakutanga kuberekwa.1 Kana yawanikwa yakawanda sechirwere chinodhura chisina mari, ikozvino ine branded version (Makena; AMAG Pharmaceuticals) inodhura anenge 100 dzimwe nguva kupfuura yepakutanga. Musi waFebruary 4, 2011, KV Pharmaceutical Company (yakazotumidzwazve kuti Lumara) yakagamuchirwa nemvumo kubva kuU.S. Food and Drug Administration yekugadzira uye kutengesa Makena, iyo inoumbwa nezvimwe zvinoshandiswa zvinogadziriswa zvinowanika mumagadzirwa ekutanga akaumbwa. Chibvumirano chacho chaisanganisira nherera yezita remishonga uye akapa KV Pharmaceutical Company kodzero dzakakwana dzekugadzira Makena, iyo inogona kugovera pamutengo wayo wepamusoro. Nokuda kwekudzidza uku, takashandisa dhizinesi reudisitiri rekutsvaga kuti tiongorore zvinyorwa zve 17-alpha hydroxyprogesterone caproate pakati peiyo 4000 inoshambadzirwa nebhizimisi (kwete Medicaid) vakadzi vane pamuviri. Chinangwa chedu ndechokuti tishandise kushandiswa, kutengesa, uye zvakagadziriswa zvezvisikwa uye zvakawandiswa zvinyorwa zvemishonga.
3.Chii chiyero che 17-Hydroxyprogesterone caproate powder?
250 mg kamwe chete kwevhiki (mazuva ose e7); kutanga chirwere pakati pevhiki dze16, mazuva e0 nemavhiki e20, mazuva e6 ekukwegura; rambai kusvikira vhiki ye37 (kuburikidza nevhiki dze36, mazuva 6) ekugumira kana kutakura, chero ipi zvayo inotanga kutanga.
Takaita shanho reviri-mapofu, rakagadziriswa ne-placebo rinosanganisira vakadzi vane pamuviri vane nhoroondo yakanyorwa yekuzvidzivirira kwepakutanga. Vakadzi vakanyoresa kuchipatara cheC19 pa16 kusvika kumavhiki e20 ekugadzirisa uye kushandiswa kwepakati pe data data centre, mune 2: 1 chiyero, kugamuchira majekiseni evhiki rimwe nerimwe e250 mg ye 17P kana majekesiti ega ega iner placebo; majekiseni akaenderera mberi kusvika pakuberekwa kana kumasvondo e36 ekugumira. Mhedzisiro yekutanga yakange iri nguva yekutangira kusati kwapera mavhiki e37 ekugumira. Kuongorora kwakaitwa maererano nechinangwa-che-kubata-chinangwa.
Maitiro e-Base-line evakadzi ve310 muboka reprogesterone uye vakadzi ve153 muboka re placebo vakange vakafanana. Kurapa ne17P kwakapedzisira kwaita kuti pave nehuwandu hwekuendesa kwemasvondo mashoma kupfuura ma37 ekuberekwa (zviitiko, 36.3 muzana muzana reprogesterone vs. 54.9 muzana muboka re placebo; pangozi, 0.66 [95 muzana yevimbiso yekuvimba, 0.54 kusvika 0.81]), kusununguka kwemavhiki mashoma anopfuura 35 ekugumira (zviitiko, 20.6 yepakati vs. 30.7 muzana; ngozi yechirwere, 0.67 [95 muzana yekutenderera mukati, 0.48 kusvika 0.93]), uye kutengeswa kwemavhiki mashoma anopfuura 32 (11.4 percent vs. 19.6 muzana ; nengozi yechokwadi, 0.58 [95 muzana mukati mekuvimba, 0.37 kusvika 0.91]). Vana vacheche vanobatwa neC17P vaiva nematombo akawandisa ekutsvaga neocrotizing enterocolitis, intraventricular hemorrhage, uye kudikanwa kwekuwedzera ekisijeni.
Zvirwere zvevhiki nevhiki zveC17P zvakaguma nekuderedza kukuru kwehuwandu hwekudzoka kwekutanga kwekutanga kwevakadzikadzi vaiva pangozi yakanyanya yekukurumidza kutora uye kuderedza mikana yezvinetso zvakawanda mumwana wavo.
4.How Cortexolone 17-Hydroxyprogesterone caproate powder mabasa?
17A-hydroxyprogesterone caproate (17-OHPC) inogadzira progestogen. Muviri womunhu hauiti kuti caproate molecule. Imwe zita rokuti caproate ndi "hexanoate," iyo inonzi ester yakabva kune hexanoic (kana caproic) acid. Chimiro che 17-OHPC chinoratidzwa mumufananidzo. Vamwe vanachiremba vakataura kuti 17-OHPC inowanikwa mumbudzi. Izvi zvinoratidzika sezvenyika, nokuti kujekeswa kweiyo molecule kubva mumvura yemuviri wepanyama, mishonga kubva kumbudzi, kana imwe mimwe mhuka mhenyu haikwanise kusimbiswa mune kutsvaga mabhuku.
Chiitiko che17-OHPC pachirwere chemuviri wechiremera kune varwere vane nhoroondo ye ≥ 1 vacheche dzinotanga kuberekwa avo vakagamuchira kugamuchira 17-OHPC neboka risina kudzorwa. Hapana misiyano mumakiromita emadziro emakwenzi ekufamba kwenguva yakaonekwa muvakadzi vakagamuchira 17-OHPC. Kusiyana neizvi, progesterone yemudzimai yakaderedza huwandu hwechivharo chechibereko chechirwere kune varwere vane nhoroondo yekutanga kwekuberekwa kana kupfupiswa kwechibereko chechivharo.
17 alpha-hydroxyprogesterone caproate (17P) inogadzirwa nemaitiro eprogesterone akave akaratidzwa kuderedza kudzokorora kweTBB kuvakadzi vane gumbo re singleton vane nhoroondo yekare. Vakadzi vane nhoroondo yekare yeTBB vanowanzove nevekutanga kune vacheche vachienzaniswa nevakadzi vasina. Kazhinji inorayirwa navanachiremba, 17P inotarisirwa kuburikidza nekujowa kwevhiki nevhiki kutanga kweZvondo ra 16-24 kusvika pakuzvarwa. Zvidzidzo zvinoratidza kuti kutungamirira 17P kune mukadzi akakodzera kunoderedza mukana wekuve neimwe PTB ne33 muzana. Gore roga roga, zvishoma, vakadzi vane pamuviri vane hutano vanosangana nekodzero uye vanonzi vanofanirwa ne30,000P.
Kugadziriswa kwehutano hwekuberekwa kwepakutanga kuvakadzi vane pamuviri we singleton vane nhoroondo ye singleton yakangoerekana yakaberekerwa kuberekwa (yakarongerwa nherera nemishonga yeDFA nokuda kwekushandisa uku).
Kubudirira kwakatemerwa zvichienderana nekuvandudzwa kwehuwandu hwevakadzi vakaendesa pa <makumi matatu nemaviri masvondo ekubata; kunanga kiriniki kubatsirwa (semuenzaniso, kuvandudzwa kwehutachiona hwekuzvarwa uye kufa) zvisina kusimbiswa.
Kudzivirirwa nekubudirira kwakaratidzwa chete kuvakadzi vane chirwere chekuzvarwa chisingatauriki; kwete kutarisirwa kushandiswa kune vakadzi vane maitiro akawanda kana zvimwe zvipingamupinyi zvekuberekwa kwekutanga.
ACOG inokurudzira kupa progesterone supplementation yekudzivirira kudzokororwa kusati kwatanga kuberekwa kune vakadzi vane singleton nhumbu uye kuberekwa kwepamberi kwekuzvarwa pamasvondo makumi matatu nemanomwe ekubata nekuda kwekuzvitangira kwekutanga kwebasa kana kukurumidza kukurumidza kwemembure.
9.Does 17-Hydroxyprogesterone caproate powder Ane Matambudziko Api?
Synthetic progestin; yakabudiswa ne esterification ya 17α-hydroxyprogesterone, inonzi metabolite inowanzoitika yeprogesterone, ine caproic acid.
Ane simba progestogenic basa; rinoratidzika kuunza nguva yakareba uye yakawanda yeprogesational effect pane endometrium kupfuura progesterone.
Hazviiti seine androgenic, antiandrogenic, estrogenic, kana glucocorticoid.
Nzira yekuita mukuderedza dambudziko rekuberekwa kwekutanga musati razivikanwa
IV. Ungatenga sei 17-Hydroxyprogesterone caproate powder kubva kuAASraw?